बुढेसकालमा सेक्सको मजा कसरी लिने ? - Baikalpikkhabar
मनोपरामर्शदाता तथा याैन मनोबिज्ञ करुणा कुँवरको सल्लाह
हो, बुढेसकालमा तन्नेरीकै जस्तो रोमाञ्च र आनन्द कहाँ पाइएला र ? ४८ वर्षको उमेरमा २२ वर्षको जस्तो आनन्द त सम्भव छैन । यस्तो अपेक्षाबाट टाढा रहनु नै उत्तम हो । तर, मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक पक्षमा सन्तुलन ल्याउनुभयो भने बुढेसकालको यौनजीवन पनि आनन्ददायक बनाउनचाहीं पक्कै सकिन्छ ।
बिहिबार, ०७ साउन, २०७८, दिउँसोको ०१:३४ बजे
यौन जीवनले दाम्पत्यमा खास प्रभाव पार्छ । यौनले शारीरिक सन्तुष्टि दिन्छ, मानसिक तनाव कम गर्छ, साथसाथै दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँछ । तर, यौन जीवनमा तगारो ल्याउने केहि तत्व हुन्छन् । तनाव बिहानदेखि बेलुकीसम्मको भागदौड, अफिसको वर्कलोड, आर्थिक समस्या, असमयमा
एजेन्सी / यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रका...
म ४८ वर्षे स्वस्थ पुरुष हुँ । पाँच...
यौन जीवनले दाम्पत्यमा खास प्रभाव पार्छ । यौनले...
२ साउन, काठमाडौं / नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी...
२३ जेठ , भक्तपुर/ विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको...